‘मिस टुरिज्म’ को उपाधि विराटनगरकी आरजु पोखरेललाई « Arthabazar.com
‘मिस टुरिज्म’ को उपाधि विराटनगरकी आरजु पोखरेललाई
प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०७६, आईतवार ०७:४०
काठमाडौँ । यस वर्षको (सन् २०१९) ‘मिस टुरिज्म’ को उपाधि विराटनगरकी आरजु पोखरेलले जितेकी छन् । १० प्रतियोगीलाई आज भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्दै २१ वर्षीया पोखरेलले सो उपाधि चुमेकी हुन् ।
निर्णायक नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) का अध्यक्ष सिएन पाण्डेले सोधेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ कार्यक्रमलाई लाई सफल पार्न गर्नुपर्ने प्रमुख तीन कामहरु के–के हुन् ? भन्ने प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ दिँदै पोखरेलले उपाधि जित्न सफल हुनुभएको हो । उपाधिसँगै उहाँले रु ५० हजार नगद प्राप्त गर्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न अवसर पाउने हुनुभएको छ ।
प्रतियोगितामा फष्ट रनअर अप काठमाडौँकी युसिका तुलाधर र सेकेन्ड रनअर अप झापाकी सविता न्यौपाने घोषित भए । उनीहरुले क्रमशः रु ३० हजार र २० हजार हात पारे । मिस टुरिज्मको उपाधि विजेता पोखरलेले ट्राभल एण्ड टुरिज्म विषयमा स्नातक गर्नु भएको छ । उहाँ हाल रोयल माउण्टेन ट्राभलमा काम गर्दै आउनु भएको छ ।
ताज जितेपछि पोखरेलले रासससँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेपाल भ्रमण वर्ष अयिभानलाई सफल बनाउन सक्रियरूपमा लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आफू पर्यटन क्षेत्रमै आवद्ध भएकोले आफ्नो अनुभवलाई आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । प्वाइन्ट मिडिया प्रालिले राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रियरूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मिस टुरिज्म प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि, महिला सशक्तीकरण र आम युवालाई आकर्षित गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नवीन काफ्लेले बताउनुभयो ।
डिसहोमको ‘डिलरदाईको डिस्काउन्ट’ नामको योजनाको विजेता घोषणा
काठमाडाै । डिसहोमले ‘डिलरदाईको डिस्काउन्ट’ नामको योजनाको विजेता घोषणा गरेका छ । कम्पनीले
काठमाडौं । सुनको मूल्य आज घटेको छ । शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२
आयल निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न सुझाव
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न संसदीय उपसमितिले सरकारलाई सिफरिस
सुनको भाउ कति पुग्याे ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज घटेको छ । आइतबार छापावाल सुन